တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ COVID-19 ကြောင့် ပျံလွန်တော်မူ – Buanchukcho
တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ COVID-19 ကြောင့် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ COVID-19 ကြောင့် ပျံလွန်တော်မူ
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသ(အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)သည် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ပျံလွန်တော်မူသွားကြောင်း မန္တလေး သာသနာ့တက္ကသိုလ်၏ မော်ကွန်းထိန်းရုံးက အသိပေးထုတ်ပြန်သည်။
မန္တလေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၏ အထူးကြပ်မတ်‌ဆောင်တွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေစဉ် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဝရာဘိဝံသကို မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ပြင်စည်စံပြကျေးရွာ၌ ၁၃၀၆ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၇)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ည(၁၂)နာရီတွင် ခမည်းတော် ဦးခင်မောင်+မယ်တော် ဒေါ်နုတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်တွင်ကျောင်းနေပြီး၊ ၁၀ နှစ်သားအရွယ်တွင် ရှင်သာမနေဖြစ်ခဲ့ကာ ပျံလွန်တော်မူချိန်တွင် သက်တော် ( ၇၇ ) နှစ်l ဝါတော် ( ၅၇ ) ဝါ ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဆရာတော် ငယ်စဉ်ကအခြေခံပညာကို ရပ်ရွာကျောင်း၌ သင်ယူပြီး၊ အထက်တန်းပရိယတ္တိ ပညာများကို တောင်ကြီး၊ ထားဝယ်၊ မန္တလေး၊ ပဲခူးစသောမြို့များ၌ သင်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရဓမ္မာစရိယ၊ မန္တလေး-ပရိယတ္တိသာသနဟိတ (သကျသီဟဓမ္မာစရိယ)၊ရန်ကုန် စေတိယင်္ဂဓမ္မာစရိယ၊ (သ. စ. အ ဓမ္မာစရိယ)၊ပဲခူးမြို့- သာသနင်္ကုရ ဓမ္မာစရိယတို့ကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ L.L.B (ဥပဒေဝိဇ္ဇာဘွဲ့)၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ M.A(မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့)၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Ph.D (ဒေါက်တာဘွဲ့)များလည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း မန္တလေးမြို့ မလွန်ဈေးဆန်လှူအသင်းကြီးက ရေးသားထားသည်။